Ny bursitis - ny fitsaboana ny hipoka, ny elany sy ny fehikibo miaraka amin'ny fanafody tsy misy alikaola amin'ny fitsaboana ho an'ny fitsaboana bursitis
Bursitis - fitsaboana any an-trano
Ny fahasamihafana sy ny fivoahana ny fiantrana dia mitranga amin'ny aretina antsoina hoe bursitis - ny fitsaboana amin'ny dingana voalohany dia azo atao ao an-trano, dia ahafahana mampifandray fitsaboana ara-pahasalamana omen'ny dokotera amin'ny fomba fitsaboana amin'ny olona.
Inona no atao hoe bursitis?
Ny famaritana ny atao hoe aretin'ny bursitis, tokony handinika ny teny latinina hoe "bursa" ao amin'ny dikanteny dia "kitapo" izy io. Ny bursitis dia dingana iray enti-manavotra izay mitranga ao amin'ny kitapom-pirahalahiana. Izy io dia miaraka amin'ny fanangonana ao amin'ny taolana amin'ny taolana mifampitohy, ny fananganana fanaintainana. Ny haben'ny kitapom-batana dia mihamitombo ny habeny, ny fisidinana dia miseho, izay mety hahatratra hatramin'ny 10 cm.
Ny aretina dia mitranga rehefa mavesatra ny faritra misy azy:
Ny bursitis dia lazaina amin'ny aretina eo amin'ny asa, matetika ny fanombohana ny aretina dia mitranga amin'ny olona mandalo toeran'ny mekanika miorina amin'ny tohotra (atleta, mpitrandraka). Ny antony mahatonga ny fisehoan-javatra dia mifanaraka tsara amin'ny kiraro na ny lanjany tafahoatra, ny trauma iraisana, ny fanangonana sira amin'ny rheumatism. Ny ankamaroan'ny marary dia lehilahy 40 taona.
Ahoana no fomba fitondrana bursitis?
Mety hiteraka olana iray mampalahelo - bursitis mahery, tsy miteraka fahasimbana eo amin'ny fahasalamana izany. Ny voka-dratsiny miverimberina dia miteraka aretina mitaiza. Ny trangan'ny aretina dia miteraka hetsika sarotra, miaraka amin'ny fanaintainana eo amin'ny fiaraha-monina voan'ny aretina. Ao amin'ny fanjakana tsy misy ilana azy dia mihamitombo ny hafanana. Ny fikarakarana bursis dia miankina amin'ny karazana aretina:
Bursitis amin'ny fikambanan'ny hipopotama - fitsaboana
Kitapo Synovial (bursa) - karazana fanodikodinam-pihodinana, mampihena ny fifandonana eo amin'ny teboka sy ny kibo. Ny fiverimberenany dia mitarika amin'ny aretina orthopedic, izay manangona rano ao amin'ny bursa. Ny fiaraha-mikorana, amin'ny tsy fisian'ny adin-tsaina, ny hôpitera, vokatry ny trauma na ny aretim-pirahalahiana, dia mety hiteraka aretina toy izany. Ny dokotera dia afaka manadihady. Ny fikarakarana ara-potoana, amin'ny dingana voalohany, dia ahafahana manasitrana ny bursitis any amin'ny toeram-pitsaboana any ivelany:
mitondra fanafody manala ny fery;
compresses mifototra amin'ny herika.
Bursitis amin'ny lohalika - fitsaboana
Ny enta-mavesatra eo am-pelatanana dia mitarika ho amin'ny fanasitranana ny tavy sy ny fahavoazana iombonana, izay miteraka ao amin'ny bursa ho fampiroboroboana. Ny aretina dia mitranga amin'ny olona izay mitaky fiasa tsy tapaka eo amin'ny fiarahan'ny lohalika (tambanivohitra, parcours, siramamy, sns). Ny fisian'ny gout, psoriasis ary arthritis dia miteraka bursitis. Ny soritr'aretina:
efa niova ny endriky ny lohalika;
ionoka ary mena;
Rehefa mahatsapa dia manjavona sy mafana ny faritra areti-mifindra;
Sarotra ny mandeha.
Ahoana no hanasitranana ny fery amin'ny lohalika ao an-trano - hampihenana ny rà mandriaka, hanangana lohalika ary hampihatra tsikirity fafana (15-20 minitra). Razirat famandrihana fanafody - diclofenac, voltaren, fast-gel. Manaova fanafody maharary fanafody - ibuprofen, ketoprofen, piroxicam. Alohan'ny handrehitra ny bursitis , dia tokony hifantina dokotera ianao, afaka manolotra antibiotika izy. Ny fitsaboana amin'ny tenany manokana, izay tsy manome valiny mandritra ny andro maromaro, dia mampitombo ny aretina, miteraka hafanana be loatra.
Bursitis amin'ny fiaraha-misakafo - fitsaboana
Ny antony mahatonga ny fery amin'ny bursa dia ny fikarakarana ara-batana tsy maharitra, mianjera, lozam-pifamoivoizana, aretina (fifindran'ny aretina amin'ny lymph na rà avy amin'ny taova). Fanaovan-javatra mihetsiketsika, izay mitranga mandritra ny fotoana maharitra, lasa mpikatroka ilay aretina. Mitranga izany eo amin'ny olona manao fanatanjahan-tena (mpilalao amin'ny tennis, gymnasts), mpitandrina, efa 60 taona. Ny fitsaboana ny bursitis amin'ny fehikibo:
ny fampihenana ny fanaintainana, ny fanilihana ny fikarakarana ara-batana, ny fanerena ny fandefasana ny fifehezana;
manaisotra ny menaka, manosotra menaka (ibuprofenovaja menaka, diklak-gel) hampihetsiketsehana;
mandray antibiotika, manao araka ny fepetra fitsaboana dokotera;
mba hanamafisana ny fitsaboana vonjimaika - ny fitsaboana ara-pahasalamana sy ny fanabeazana ara-batana.
Ahoana no hanasitranana ny bursitis joint ely?
Ny fahavoazana na ny ratra amin'ny kofehy dia mety hiteraka bursitis. Diagnostika mora izany - mitombo ny elatra avoakan'ny toetr'andro tsy manara-drenirano, dia miteraka fihenam-bidy, mivadika amin'ny faritra sy ny alahelo. Noho ny fitsaboana bursitisan'ny glanda ulnar dia voafaritry ny dokotera aorian'ny fanadihadiana. Ny aretina dia ahitana karazana tranga roa - trondro na aretina. Mampihoron-koditra amin'ny fomba mahazatra sy ny fomba amam-panao ny traumatic (inflammatory). Ny fitsaboana ny bursitis amin'ny fiterahana dia midika amin'ny alalan'ny fandidiana - mando ny kitapo ulnar, manorata antibiotika.
Bursitis amin'ny tanany - fitsaboana
Ny fanaintainana mafy amin'ny tanany dia hanaisotra ny valiziny, voaomana amin'ny fivarotam-panafody. Azonao atao ny mitondra bursitis miaraka amin'ny dimexide ary ampiana azy io - manosotra ny lamba fandevenana (napetraka imbetsaka) ary ampahoana 2-3 heny isan'andro amin'ny toerana maloto mandritra ny adiny iray. Fihetseham-po mahomby eo amin'ny sehatry ny fiankinan-doha sy ny fanaintainana amin'ny andro voalohan'ny aretina. Manomàna fametahana loto:
50 ml rano;
Bursitis Achilles tendon - fitsaboana
Ny aretin'i Albert na ny bakteritika Achilles voatery dia mitranga noho ny entana mavesatra eo amin'ny tongotra na ny toerana tsy mety amin'ny tongotra rehefa mandeha. Misy ny fihenam-bohitry ny tavy ao amin'ny tebiteby amin'ny tendron'ny taolam-paty amin'ny tendron'ny Achilles, mipoitra eo ambonin'ny taolam-bozaka ny kitapo moka. Ny faritra ao amin'ny faritra ambonin'ilay voditongotra dia mibontsina, mihovotrovotra ary lasa mampijaly, izay mitarika amin'ny fahaverezan'ny fiasan'ny fihetsiketsehana. Ireo tranga mahatsiravina:
fiara tsy mahazatra - lava lava, mihazakazaka eny ambony;
kiraro tsy voafehy - haingam-pandeha, mafy mafy;
aretina iombonana - gout, arthritis;
fitandremana taorian'ny aretina mifindra;
Ity karazana aretina ity dia mihatra amin'ny vehivavy matetika. Mandeha lava amin'ny kiraro avo, ary avy eo ny fiovana mafy eo amin'ny toeran'ny tongotra ao an-trano - tavy, dia ny antony mahatonga ilay aretina. Ny fitsaboana ny bursitis dia azo sakanana amin'ny alàlan'ny fehezina eo ambany voditongotra, ny holofy malefaka dia hanamaivana ny tsindry ary hampihenana ny fiterahana. Manao karazana kiraro manokana izay mamaha ny toeran'ny tongotra, fa tsy mamela hetsika maranitra mafy. Raha toa ka tsy manome valiny ny fomba fisorohana amin'ny ady atao amin'ny aretina, dia azo omena fanafody ny fanafody - tsy fampiasana fanafody mampihoron-koditra tsy arifomba amin'ny fitsaboana bursitis:
tenoxicam sy ny hafa.
Bursitis amin'ny voditongotra - fitsaboana
Ahoana no fomba fitondran'ny bursitis hoal , raha toa ka nahazo endrika efa antitra izy. Mifantoka amin'ny sehatra sy ny antony mahatonga ny aretina, ny dokotera dia mandefa fanafody (fanesoana, electrophorese, fanosehana, lozisialy) na fomba amam-panao (fitsaboana chirurga) fitsaboana bursitis. Ny fiaraha-miasa tsy voatery, dia tsy tokony hifindra (fitsaharana), tokony hihazona ny legiom-paharetana amin'ny toerany. Alohan'ny hanombohanao mandeha ao an-trano dia aforeto amin'ny lamosina elastika ny tongotra. Mamelatra ny fanaintainana, mampihatra ny ravin-kiran'ny Kalanchoe, tapaka mandra-piforonan'ny sira.
Fitsaboana bursitis miaraka amin'ny fitsaboana amin'ny olona
Ny fitsaboana bursitis miaraka amin'ny herbs araka ny fomba fitsaboana nentim-paharazana dia natao tamin'ny famantarana voalohany amin'ny aretina. Teknika mahazatra sy tsotra mampiasa herisetra, manampy tokoa. Raha voan'ny antibiôtika ny dokotera, ny famenoana ny fanafody dia ny fandroana sy ny filomanosana, voaomana amin'ny fotodrafitrasa voajanahary. Ny fandraisana ireo batisan-jazakely, balsama ary loto, manampy amin'ny fanasitranana ilay aretina ary manentana ny fizotran'ny taolana.
Haymaking Trash . Nokolokoloina ny loto ary lanjany 1 kilao amin'ny 4 litatra ny rano voamaina ary efa nahandro nandritra ny 30 minitra. Misy tandroka iray manify no ampiasaina ao anaty fandroana.
Mandroaka avy amin'ny fanjaitra . Ny siny kesika sy ny pine dia nidina tamin'ny rano mangatsiaka ary afaka nidina 5-6 ora. afindrafindra ary ampio amin'ny fandroana.
Ravinkazo miaraka amin'ny tantely . Ny ravinkazo vita amin'ny lobaka fotsy dia nototofana hatramin'ny fiterahana sy ny fisehoana jiro. Ao amin'ny tranokala marary, ampitomboy ny tantely, atsangano amin'ny laisoa - rakotra amin'ny sarimihetsika iray ary aforeto amin'ny lamba.
Burdock dia tsotra . Voa maina amin'ny zavamaniry 2 tm. L. mofomamy rano 1 litatra ary mahandro mandritra ny 30 minitra. Esory ny fakana rano ary ampiharo amin'ny faritra voakasika mandritra ny 2 ora, mandrakotra ny tampony amin'ny hafanana.
Tea celery . 1 tbsp. L. masomboly ahi-maitso, ento ny vera misy rano mangatsiaka ary manindry 2 ora. Zarao ny dipoavatra nahazo ny dizitokana 2 isan'andro, mihinana alohan'ny sakafo.
Fitsaboana bursitis amin'ny propolis
Noho ny fikarakarana bursitis ao amin'ny mpanamboatra toro-hevitra ao an-trano izay mahatsapa fa vita amin'ny propolis miaraka amin'ny vodka ho an'ny tsindry, dia esorina ny areti-maso sy ny fivoahana.
Mba hanilihana ny propolis sy ny vodka amin'ny tahan'ny 1:10, mijanòna dimy andro farafahakeliny ao anatin'ny haizina.
Natsofoka tao anaty takelaka nisy lamba iray nanarona ny faritra voakasika nandritra ny 30 minitra, 2-3 compresses isan'andro.
Ny halavan'ny fepetra dia 7-10 andro.
Aloe eo amin'ny varavarankely, eo am-pelatanany, fomba hanasitranana bursitis miaraka amin'ny fanampian'ny zavamanantany fantatra phyto-therapeutists. Ny endriky ny zava-mahadomelina ao amin'ilay zavamaniry dia ampiasaina amin'ny famokarana menaka fanafody sy tsindry izay manamaivana ny areti-maso ao amin'ny teboka.
3-4 ny ravin'olom-bozaka marevaka marevaka ary mametraka ny andro faha-2 ao amin'ny vata fampangatsiahana.
Avy any amin'ny tadiny dia esory ny sira ary apetraho amin'ny gaza izy ireo, ary asio boribory sy rolahy.
Compresso afaka miova in-3 isan'andro.
Softball - inona no tianao hilalao ary inona ny fahasamihafana eo amin'ny baseball sy softball?
Fiarovana amin'ny snowboarding
Tendovaginitis - fitsaboana
Ahoana no hisafidianana tariby ho an'ny latabatra latabatra?
Aloe juice avy amin'ny hatsiaka
Shish kebab avy amin'ny salmon amin'ny giro - recipe
Toeram-pivarotana vita amin'ny boribory boribory
Ny fanatanterahana an'i Simoron dia maniry - visualisation
Inona no nofinofin'ny vorona?
Ahoana ny fomba hanaovana ny karipetra?
Nahoana no misy nofinofy mena?
Ny dobo avy amin'ny bata fahiny